Global Voices teny Malagasy » Kenya: Maneho hevitra momba ny fanapoahana baomba tany amin’ny kianjan’i Uhuru ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jona 2010 8:14 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Candy
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Vonjy Voina
Olona enina no maty ary 75 no naratra tamin'ilay fipoahana nandritra ny hetsika ara-politika tany Nairobi tamin'ny Alahady. Nokarakarain'ny vondrona “Tsia” io hetsika io, izay manohitra ny fampihàrana ny lalampanorenana vaovao. Ireo mpitondra fivavahana any Kenya dia nanameloka ny fitondràna tamin'iny fipoahana iny . Ny Filoha Mwai Kibaki sy ny Praiminisitra Raila Odinga dia ao amin'ny vondrona “ENY”, izay manohana ny lalampanorenana. Amin'ny volana Aogositra amin'ity taona ity no hatao ny fifidianana io lalampanorenana vaovao io .
Ny fanontaniana ezahan'ny ankamaroan'ireo Keniana amin'ny aterineto valiana dia ny hoe iza no tao ambadik'iny fipoahana iny? Tsy manàla ny fisian'ny fifandraisana amin'i Somalia  i Ken Opalo :
Tranga mampatahotra ity, raha jerena ny zava-mitranga any Somalia. Manantena aho fa zava-tsy nahy tsy misy ambadika iny fipoahana iny ka tsy nokononkononina mpampihorohoro hampitahorana ireo manohitra ny volavolan-dalampanorenana vaovao.
Miteny i Kenya Political fa  mitondra any amin'ireo olana eo amin'ny tsy fandriampahalemana, tsy fifandeferana ara-pivavahana ary herisetra politika any Kenya iny tranga iny:
Mampiseho izany fa tsy miankina amin'ilay herisetra taorian'ny fifidianana nampikorontana ny firenena taorian'ny fifidianana nifanandrinana tamin'ny 2007 ny fahalemen'i Kenya. Ireo fanentanana amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mamoaka ireo fihetseham-po notsindrian'ny vahoaka Keniana, izay mampiseho fa i Kenya amin'ny maha-firenena azy dia mbola tsy lavitry ny hantsana nilatsahany tamin'ny 2008 na dia teo aza ny governemanta iaraha-mitondra nanao setroka nanarona.
Manondro koa izy fa ity no tranga faharoa mikasika ny fandriampahalemana tamin'ity taona ity :
Ity no tranga fanindroany mahakasika ny fandriampahalemana aty Nairobi, renivohitr'i Kenya. Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, sehatry ny fampisehoan-kery natao hanerena ny fitondràna hamotsotra ilay pretra Silamo Jamaikana tsy ahodin-doha, Abdulla al-Faisal i Nairobi. Nisy ny naratra ary maro no maty. Nisy manamboninahitra polisy iray avy amin'ny General Service Unit voatifitra ary noratrain'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nitam-piadiana. Nihiaka teny filamatra ireo mpanao fihetsiketsehana ary nitondra saina mifandray amin'ireo milisy Silamo Somaliana al-shabaab.
Onyango Oloo dia nanolotra ny tenany ho  “manampahaizana mitondra hevitra mitombina momba izay tao ambadiky ny fipoahana tao amin'ny Kianjan'i Uhuru”:
Ary toy izao no hanolorako ny tenako, Onyango Oloo, ho manampahaizana manana hevitra mitombina momba izay tao ambadiky ny fipoahana tao amin'ny Kianjan'i Uhuru. Samy mahalala ny rehetra fa tsy voatery mankany amin'ny Sekolin'ny mpitandro filamninana any Kiganjo, Scotland Yard na koa any amin'izay nahazoan'ireo olon'ny FBI zo hampidera ny karatr'izy ireo, izay vao afaka mahafantatra izay nanao iny, sa tsy izany?
Iray hafa matomatotra kokoa, resaky ny mpidoroka sy ara-politika, raha misy te-hahafantatra hoe iza no ao ambadik'iny asa ratsy iny dia mila mampihatra ny iray amin'ireo lesona avy amin'ireo mpitsonodia manampahaizana rehetra efa niresahako.
Ireo tena mahay dia mametra-panontaniana tsotra amin'ny tenany hoe:
Iza no mety hahazo tombony amin'ity famonoan'olona, fangalàrana, fanaovana hosoka, fandoroana fananan'olona ity? (fenoy ny banga)
Ny fanontaniana ankilan'izany kosa dia hoe:
An'iza ny fatiantoka?
Satria tany amin'ny hetsik'ireo “TSIA” no nisy ireo fanafihana tamin'ny grenady sy ireo ratra ary fahafatesana naterak'izany, tsy maintsy valiana ireo fanontaniana ireo momba ny fampielezan-kevitra miha-mahery setra manohana sy manohitra ny fampiharana ny volavolan-dalampanorenana vaovao.
Avy hatrany dia nivadika ho olana ARA-POLITIKA manodidina ny FAHEFANM-PANJAKANA, TOE-KARENA sy ireo SEHATRA MAVITRIKA ary ny VOKATRY NY FITSAMPAN-KEVI-BAHOAKA izy ity.
Koa andao, toy ireo mpitsongodia mahay sy miasa tena rehetra, hanomboka amin'ny FANONTANIANA MARINA mba ahazoana VALINY MARINA.
1. ARA-POLITIKA, hery ara-tsosialy iza avy no mety mahazo tombony tamin'iny fanafihana mpampihorohoro farany iny? 2. ARA-POLITIKA sy ARA-TOEKARENA, iza no resy raha ankatoavina ny tolotra lalampanorenana Kenyana vaovao amin'ny fitsapan-kevi-bahoak amin'ny 4 Aogositra?
Manàla ny vondrona “ENY”  amin'ny lisitr'ireo ahiahiana izy:
Amiko, ara-politika, TSY MISY tombony ho an'ny lafiny ENY ny fanipazana grenady telo tànana hamonoana olona tsy manan-tsiny manatrika hetsika atao am-pilaminana, mampiasa ny zon'izy ireo hivondrona araka ny lalampanorenana , hiara-hiasa ary haneho ny heviny. Sady mahafaly manokana ireo mpanohana ny ENY ny fanitarana ny Lalàn'ny Zo ao anatin'ilay lalampanorenana vaovao.
Ka aleo TSOAHINA ao amin'ny lisitr'ireo mampiahiahy ny vondrona ENY.
Manàla ny fiangonana ihany koa izy :
Aleo tonga dia tsoahantsika avy hatrany amin'izao habibiana izao ny fiangonana sy ireo mpitarika azy. Na dia halako aza ny fihatsaram-belatsihy sy ny fiadanana ara-pilazantsara “bling bling” hosoky ny Eveka Wanjirus sy Pastora Lais, TSY MINO MIHITSY aho fa hoe nikononkonona ny famonoana an'ireo mpino Kenyana an'arivony miangona isan'Alahady izy ireo mba ahazoana antoka fa manohy miaina malalaka sy am-pahafahana ireny lehilahy sy vehivavin'ny fiangonana ireny nefa ny zanak'ondrin'izy ireo miasa mafy hampitomboana ny am-pahafolon-karena sy ny sadaka. Tahaka ny mampiasa kalaza maranitra [Avy amin'ny mpandika: Kalaza , iantsoana ireny karazana antsibe fikapàna tahom-pary ireny] hanapotsahana ny tsinain'ny tenany ihany izany.
Manana ny heviny manokana  i Tome Francis avy ao amin'ny Kenya Young Voters Alliance:
Mahavariana fa ny olona sasany ao amin'ny vondron'ny TSIA dia nieritreritra ny fipoiran'ny tsy fifandeferana ara-pivavahana sy ny hoe tokony hampiharina amin'izao endriny izao ve ilay volavolan-dalàmpanorenana vaovao. Fahatanterahan'ny “faminanian-dry zareo” ve iny tranga mampihoron-koditra iny?” Mety hoe nifidy ny hampiasa herisetra mampihoron-koditra, manaitra, mihoson-dra sy manimba kokoa ve ireo mpaminanin'ny androm-pahoriana farany ireo, mba hahatonga ady ara-pivavahana mafana lavitra noho izao? Raha misy manontany ahy raha tena fialàna bala nataon'ny vondrona TSIA tokoa ny zava-nitranga tao amin'ny Kianjan'i Uhuru, eny avy hatrany no valin-teniko, ny antony tsotra dia satria leon'ny mitady fangorahana, lanja sy hery handresena amin'ny fifidianana amin'ny Aogositra ny elatra politika ao amin'ny vondron'ny TSIA. Lehibe ny fakam-panahy ho amin'ny fialàna bala toy izany ao amin'ny elatra politikan'ny vondron'ny TSIA noho izy ireo nanohana foana ny tsy fifandeferana ara-pivavahana satria izay ihany no fomba hahazoan-dry zareo hery amin'ny hevitry ny vahoaka hanoherana ny volavolan-dalàmpanorenana. Taoriana ezaka maro tsy nahomby hiantsiana fifankahalàna sy fandresen-dahatra amin'ny tsy fifandeferana ara-pivavahana eo amin'ireo Kristiana sy Silamo, toa nahazo vahana tao amin'izy ireo ny hakiviana, ary noho izany hakiviana izany dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra mahakivy koa ireo olona ireo. Mety ho tafiditra ao amin'izany fanapahan-kevitra mahakivy izany iny fialàna bala amin'ny fanapoahana nandritra ny hetsika tany amin'ny Kianjan'i Uhuru iny mba hiezahana mamadika ny fandehan-javatra momba lalampanorenana. Toy ny an'ny mpitondra fiangonana, tsy maintsy mandinika ny fahantràna sy ny fahaterena eo amin'ny sehatra misy ireo mpanao politika izay milaza ho miara-dàlana amin-dry zareo ry zareo. Ny hany irian'izy ireo dia ny hampiasa ny Kristianisma ho fitaovana hanatràrana ireo tanjon-dratsin'izy ireo.
Mino i Kumekucha  fa azontsika atao ny mahita hoe iza no tompon'andraikitra, amin'ny fametrahana ireto faontaniana manaraka ireto amin'ny tenantsika:
1. MANDRAKARIVA MANDRAKARIVA isak'izay misy heloka bevava, ny zavatra voalohany tsy maintsy tadiavina foana dia ny antony. Mazava loatra fa antony ara-politika no nanaovana ilay fanapoahana satria fihaonana ara-politika iny mba hanentanana ireo Kenyana hifidy ny TSIA amin'ilay lalampanorenana vaovao. Ary noho izany dia mila manontany tena isika hoe iza no tena mahazo tombontsoa be indrindra tamina tranga mahatsiravina toy izao (mazava ho azy fa miafina any amin'ny maizimaizina any izy).
2. Mila mandinika ny tantara isika ary manontany tena raha efa nitranga tany aloha ny toy izao ary miezaka manangona tranga maro arak'izay azo atao momba ireo “fanapoahana ara-politika” teo aloha satria fanalahidy lehibe amin'ny famaliana ny fanontaniana napetrako tery am-piandohàn'ny lahatsoratra izany.
3. Fahatelo dia mila mandinika ireo tranga niseho nandritra ny 48 ora farany na teo ho eo isika ka miezaka mamantatra raha efa voakajy ara-potoana tsara ny fanapoahana (izay fomba mahazatra amina fihaonana ara-politika voalamina toy itony.)
Mino i Kenyan Entrepreneur  fa vokatry ny ady fahefana ara-tantara misy eo amin'ireo Kikuyu  sy ny Kalenjin  izao:
Mahatsiaro indray aho fa toa manomboka ho lasa toy ny tahiry simba ny tenako. Mila mamerina eto izay efa nolazaiko nandritra ireo roa taona lasa, toy izao: Misy ady fahefana eo amin'ireo Kikuyu sy ireo Kalenjin. Ireo foko roa izay nitondra an'i Kenya nanomboka tamin'ny fahaleovantena, ary satria izy roa ireo no nitondra ny firenena, izy ireo no manana hery lehibe indrindra, fa mbola lehibe noho izany, manam-bola be indrindra.
Niteny aho roa taona lasa izay fa tena mampidi-doza ireo Kalenjin ireo. Manam-bola be ry zareo ary napetrak'i Moi any amin'ny tafika ny ankamaroan-dry zalahy. Raha Kibaki indray, am-pahakiviana no ilazako fa tsy maika ny hampihena isa ao amin'ny tafika koa izy ireo. Noho izany, satria toa mbola matoritory Kibaki, nandray fahefàna i Mungiki ary raha misy korontana (toy ny tamin'ny 1991, 1992 & 2007) – izy ireo no hiaro ny vahoakany.
“Raha an'ny Kenyana ny lalampanorenana, maninona ireo Kenyana enina amin'izao no tsy mampitovy fomba fijery?,” hoy Kenya My Land manontany :
Raha an'ny Kenyana ny lalampanorenana, maninona ireo Keniana enina amin'izao no tsy mampitovy fomba fijery? Raha tena an'ireo Kenyana tokoa izany, dia Ajanony re, amin'ny anaran'ireo Kenyana! dia mba diniho hoe inona no hanerenareo ireo Kenyana, Ajanony! dia jereo izay ahafahanareo mampihavana ireo lafiny roa, amin'ny fanomezana anay lalampanorenana tena nifanarahana, mba hahatsapànay fa tena Kenyana tokoa izahay, manaiky ary tafiditra ao amin'ny fepetra ao amin'ny lalampanorenana vaovao. Aoka izay! dia manaova lalampanorenana ho an'ny Keniana, tsy misy fiangarana, fanerena, na fanararaotam-pahefana.
Mba afaka handray lesona ary ve isika, ry Kenyana malalako?…
Ireto manaraka ireo ny fanehoankevitr'ireo Keniana  ao amin'ny Twitter (#UhuruBlast ):
Rombokins: nanambara fanomezana 500 000ksh ho an'izay mahita ireo atidoha niketrika ny fanapoahana tao amin'ny kianjan'i uhuru ny polisy. #uhurublast
3 ora lasa izay tanaty tranonkala
chardgn: Mijery ny “version” tsy voatapatapaka #uhurublast @KTNKenya. Tena mamaky sofina ireo grenady. #mwathani
8 ora lasa izay tamin'ny alalan'ny Snaptu
UjenziBora: Dia ahoana raha toa ny fanapoahana sy ireo vavaka ka fihitàrana ara-politika amin'ny fomba hafa? #ThisIsKenya #UhuruBlast |
19 ora lasa izay tamin'ny alalan'ny Snaptu
victoriaambre: RT @chardgn: Maninona ireo kiraro foana no sisa tavela isaky ny tranga mampalahelo. #uhurublast #onyancha~noheveriko izaho irery no nahatsikaritra.
SWMaina: Mampalahelo fa azo tsorina hoe ny fitondràna irery no mahazo alalana amina grenady. Ary tsy miaro azy ireo aho #uhurublast
1 andro lasa izay tanaty tranonkala
solocheruiyot: #whywouldyou nahoana ianao no miresaka amin'ireo mpanao gazety momba ilay fipoahana minitra vitsy monja aorian'ny fipoahana? Tsy hanao izany ianao raha tsy nahalala fa tsy hisy baomba hipoaka intsony #uhuruBlast
passionmango: RT @larrymadowo: Miarahaba an'izao tontolo izao. Mirary andro feno filaminana. Ny sasany nahafoy rahalahy, rahavavy, ray na namana tamin'ilay fipoahana tao uhuru #uhurublast. Angaha isika tsy afaka hihavana mihitsy e?
Gordie88: Miarahaba ireo mpi-tweet… Mirary fiononana feno ho an'ireo nahafoy ny malalany tamin'ilay fipoahana tao uhuru #uhurublast Andriamanitra hitahy an'i Kenya ary enga anie isika hifankatia
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/06/21/6612/
 dia nanameloka ny fitondràna tamin'iny fipoahana iny: https://mg.globalvoices.org%20http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/10311179.stm
 ny fifidianana io lalampanorenana vaovao io: http://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_Constitution_of_Kenya,_2010
 Tsy manàla ny fisian'ny fifandraisana amin'i Somalia: http://kenopalo.wordpress.com/2010/06/13/five-dead-in-nairobi-blasts/
 Miteny i Kenya Political fa: http://kenyapolitical.blogspot.com/2010/06/tens-injured-at-no-rally-in-uhuru-park.html
 ity no tranga faharoa mikasika ny fandriampahalemana tamin'ity taona ity: https://mg.globalvoices.org%20http://kenyapolitical.blogspot.com/2010/06/tens-injured-at-no-rally-in-uhuru-park.html
 Onyango Oloo dia nanolotra ny tenany ho: http://demokrasia-kenya.blogspot.com/2010/06/who-stands-to-gain-from-uhuru-park.html
 Manana ny heviny manokana: http://kenyayoungvotersalliance.blogspot.com/2010/06/grief-and-consternation-strike-yet.html
 Mino i Kumekucha: http://kumekucha.blogspot.com/2010/06/those-behind-uhuru-park-bombing.html
 Mino i Kenyan Entrepreneur: http://www.kenyanentrepreneur.com/uhuru-park-blasts
 hoy Kenya My Land manontany: https://mg.globalvoices.org%20http://kenyamyland.blogspot.com/2010/06/very-sad-day-for-kenya.html
 ny fanehoankevitr'ireo Keniana: http://search.twitter.com/search?q=%23uhurublast